We Fight We Win. -- " More than Media ": ပြည်သူတွေက အပြောင်းလဲကိုလိုချင်နေပြီ ။ ၂၀၀၈ ကိုလက်မခံကြောင်း ပြသနေတာဖြစ်တယ်။ ဖွဲ့ စည်းပုံကို အမြန် ပြောင်းပြစ်ကြပါစို့ 
ပြည်သူတွေက အပြောင်းလဲကိုလိုချင်နေပြီ ။ ၂၀၀၈ ကိုလက်မခံကြောင်း ပြသနေတာဖြစ်တယ်။ ဖွဲ့ စည်းပုံကို အမြန် ပြောင်းပြစ်ကြပါစို့ 
While I was watching the DASSK video and explaining my son (4th grade) about her. He asked me "why people don't care about the current president?. She is like angel for the Burmese.
4 March 2012 at 17:42